Raw Methasteron (Superdrol) vovoka Fambolena sy mpanome - Pabrika
Ny Methasteron (Superdrol), izay antsoina koa hoe Superdrol na methyldrostanolone, dia iray amin'ireo mahery vaika steroitranina anabolic-androgenic (AAS) mahery any ivelany.
Raw Methasteron (Superdrol) dia steroid anabolic. Ho an'ny tanjona ara-nofo / ara-atletika Raw Methasteron (Superdrol) dia mampitombo ny herin'ny testosterôn izay mampiakatra ny fiakaran'ny haavony sy ny habeny, indrindra noho ny fahafahany mampitombo ny isan'ny vozona.
Raw Methasteron (Superdrol) voly (3381-88-2) video
Raw Methasteron (Superdrol) vovoka (3381-88-2) Description
Ireo tombontsoa manokana ireo dia mahatonga an'i Methasteron ho toy ny androgen marefo, fa misy ihany koa ireo toetra hafa mahazatra steroid toy ny: nitombo ny sela mena (RBC); Manamafy ny fiaretana mandritra ny fanatanjahantena amin'ny alàlan'ny fanariana asidra tsara kokoa; Ahitana ôksizenina sy sakafom-pamokarana bebe kokoa amin'ny fihazakazaky ny hozatra ho an'ny fahasalamana bebe kokoa; Ny famerenana indray ny famerenana ny glycogène kokoa aorian'ny fampiharana ny fampiarahana haingana; ny fihenan'ny kisendrasendra (fandringanana hozatra).
Ny poofa Raw Methasteron dia steroide anabolic izay mitondra tantara kely miavaka raha oharina amin'ny steroids maro anabolic. Roherina Superdrol volo dia anarana famokarana ho an'ny hormone anabolic vertefera mivarotra ho hormonina pro na fanampiana amin'ny sakafo amin'ny Anabolic Extreme.
Raw Methasteron (Superdrol) vovoka (3381-88-2) Specifications
Product Name Raw Methasteron (Superdrol) vovoka
Anarana simika 2, 17-Dimethyldihydrotestosterone; 17-hydroxy-2, 17-dimethylandrostan-3-iray
molekiolan'ny Formula C21H34O2
molekiolan'ny Wvalo 318.49
mitsonika Point 223-225 ℃
vayma- Point 423.8 ° C amin'ny 760 mmHg
Ny antsasaky ny biolojia 8-12 ora
Raw Methasteron (Superdrol) vovoka Application For bodybuilding
Inona ny Rohahy Methasteron (Superdrol) (3381-88-2)?
Ahoana ny fomba famonoana Raw Methasteron (Superdrol) (3381-88-2) asa
Ny Superdrol dia miasa amin'ny fampiroboroboana ny fitehirizana ny azota sy ny proteinina. Ny tombontsoa amin'izany dia ny fananganana proteinina marobe, ary ny tohadrano azo notsongaina dia natsangana bebe kokoa. Ho haingana kokoa ny tahan'ny fampidirana sy ny fihazonana, ny haingam-pandeha dia ho lasa lehibe.
Ny fampiasana Superdrol koa dia mitarika amin'ny oksizenina amin'ny tazomoka. Rehefa mampiofana dia mivatravatra ny microfibers ary mitombo ny hozatra noho ny fanamboarana azy. Ny oksizenina bebe kokoa dia midika fa mihitsoka haingana izy ireo ary noho izany, afaka manofana mafy kokoa ianao izany mampitombo ny haben'ny hozanao.
Raw Methasteron (Superdrol) vovoka (3381-88-2) Dosage
Rehefa miresaka momba ny dosage Superdrol isika, dia tsy maintsy tadidintsika fa ny tanjona amin'ny vatan'ny olona dia samy hafa amin'ny olona. Na dia mety te-hanangom-bola aza ny sasany, dia mety hikapoka ny hafa. Amin'ny ankapobeny dia ampy ny dosage amin'ny 20-30mg amin'ny Superdrol mandritra ny efa-hatramin'ny herinandro enina ka hatramin'ny herinandro mba hanomezana anao ny vokatra kininina raha tsy mampidi-doza ny fahasalamanao.
Ny ankamaroan'ny mpampiasa Superdrol dia miteny fa alohan'ny hisafidianana ny dosage Superdrol, dia tokony hitazona ny fifandanjana marina eo amin'ny akoram-pandrosoana sy ny vokatra hafa ianao. Afaka mandroso hatramin'ny 40mg raha tianao. Amin'ny alalan'ity dosage ity, dia hahomby amin'ny hozatra sy ny tanjaka ianao raha tsy manadino ny vokatry ny Superdrol koa. Tsy mendrika izany.
Raha misafidy ny hitondra ny 40mg ianao dia tsy tokony hampiasa izany mandritra ny efa-bolana mahery. Aorian'ity vanim-potoana ity dia ho tototry ny aty anao ny aty fa raha tsy miala sasatra ianao, dia mety hiafara amin'ny olana eo amin'ny aty. Aorian'ny efatra herinandro, ny aty ho voatery haka azy io mba ho afaka hiasa araka ny tokony ho izy.
Raha toa ka mihazakazaka ny Superdrol ianao, dia azonao atao ny mizara ny dosage ho lasa kely kokoa ary ento azy mandritra ny andro. Azonao atao, ohatra, ny iray isa-maraina, ny iray alohan'ny handehanana ary ny dosage farany dia azo atao amin'ny hariva. Raha manao izany ianao, dia ho tratran'ny voka-bary kokoa noho ny fakana Superdrol mety hiteraka fahasosorana eo amin'ny hormoneso.
Raw Methasteron (Superdrol) vovoka (3381-88-2) tombony
Ny fahaverezan-danja dia ny faniriana vaovao eo amin'ny tontolon'ny fambolena. Misy vokatra maro eny an-tsena izay mitaky fanampiana amin'ireto sy ny hafa dia mbola miroborobo hatrany. Ny olana dia tsy ny rehetra no mahomby ary mety tsy hanampy anao hahatratra ny lasibatra izy ireo. Ny sasany mety mahatonga anao tsy handany haingana haingana ka hijanona amin'ny hipopotama ny hoditra na ny hozatra.
Ny tanjonao faratampony dia tokony hihena matavy amin'ny fampihenana ny tavy vatana tafahoatra fa tsy very ny hozatrao. Rehefa very ny hozatrao ianao, dia lasa tsy misaina, ary manjavona ny fifandraisanao rehetra.
Raha nieritreritra ny handraràna ireo vola fanampiny ianao dia tokony ho tonga ao an-tsainao voalohany ny Superdrol. Na efa nanandrana nikarakara sakafo ianao na fampiofanana na roa, dia mety ho hitanao fa mila zavatra fanampiny ianao. Soa ihany, ny Superdrol dia manampy anao hampihenana ny lanjany amim-pahombiazana. Izany dia iray amin'ireo vokatra azo atokisana.
Ny tombony amin'izany dia ny manolotra vokatra mahagaga amin'ny fanampiana anao hampihenana ny lanjanao eo amin'ny lanjanao tsara. Koa satria manana hery hiarovana ny hozatrao ianao, dia hanana toetra tsara foana hatrany ianao satria ny Superdrol dia manampy amin'ny fandoroana tavy madio ary tsy misy zavatra hafa.
Tsy misy fitehirizana rano
Ny mpanao biriky rehetra, na tanora na antitra, dia tsaraina amin'ny sintominy sy ny famaritana azy ary ny halavany. Rehefa manana famaritana hozatra tsara kokoa ny olona iray dia ambany ny halatr'izy ireo. Na izany aza, indraindray dia mety hitarina ny fiarovan-tenan'ny muscle noho ny fihazonana ny rano.
Ny steroïde sasany dia hanampy anao amin'ny fahazoana hozatra lehibe izay vokatry ny fitehirizana ny rano. Raha ny marina, tsy te-hijery ny faniriana rehetra ianao noho ny fisotroana be loatra. Mbola mifantoka amin'ny sakafo sy ny fampiofanana ary ny fitsaboana ny steroid ianao, ary avy eo dia mitombo ao anaty hozatra ianao. Tsy tokony ho ny antony mahatonga ny hozatry ny hozatra ho anao.
Ny fandaniana toy izany dia ho very avy hatrany raha vantany vao vita amin'ny dosage ianao. Vetivety fotsiny izany ary afaka hiala amin'ny fandefasana anao toy ny taloha alohan'ny fampiasana steroid.
Ny singa iray miavaka amin'ny Superdrol dia tsy miteraka ny fitehirizana rano. Izany no antony mahatonga ny hozatra ho mafy kokoa, ary mahatalanjona ny mozika. Ity steroid ity dia mendrika ny mividy satria afaka manolotra anao famaritana tonga lafatra izay hahazo anao ny toerana voalohany raha toa ianao ka manatrika fifaninanana tsy ho ela.
Mihantona misimisy kokoa
Hatramin'izao dia efa renao angamba ny fomba azonao anaovana ny hozatrao. Raha mbola mikatsaka hatrany ny fomba hahatratrarana ny hozatra goavana ianao, dia mbola hihaona bebe kokoa hatrany, ary izany dia rehefa mahatsikaritra fa misy toro-hevitra maro samihafa. Ny sasany amin'izy ireo dia hamela anao hikorontana, hikorontana ary ho kivy. Eny, manana vaovao tsara ho anao aho:
Ny vokatra Superdrol dia tena mahomby raha toa ka manapa-kevitra ny hividy ny vovony Superdrol ianao, dia mety tsy hiverina intsony. Azoko antoka fa hiteny ianao hoe raha midika hoe miandalana ianao na tsy misy ny hozatra, ity steroid ity dia hanampy anao hanangana fivalanana hozatry ny muscle izay tianao.
Araka ny voalaza terỳ aloha, ny vokatry ny Superdrol dia vokatry ny fananganana proteinina sy ny fihazonana azota. Samy nitombo tsikelikely ny roa tonta, ka izany no mahatonga ny fandrosoan'ny taovam-pandevozan'ny Superdrol ho lohateninao na ao amin'ny toeram-pandihizana sy ao amin'ny toeram-piasanao. Rehefa mieritreritra an'izany ianao, dia tsy hanontany tena ianao hoe nahoana no manintona kokoa ny hozatry ny hatokao isan'andro.
Tsy misy fiantraikany eo amin'ny estrogenic
Iray amin'ireo vokatra mahatsiravina izay mahatonga ny steroïd dia miteraka vokatra. Amin'ny lafiny iray, midika izany fa misy fiovana eo amin'ny fampandrosoana ny firaisana ara-nofo sy ny fananahana. Tsy misy olona te hijaly amin'ny gynecomastia na ny lehilahy boobs rehefa miezaka ny hozatra kokoa ny hozatra. Mety hahatonga anao ho menatra sy fihomehezana koa izany. Ity steroid ity dia tena sarobidy satria ny vokatry ny Superdrol dia tsy mampiditra ny vokatra estrogenic.
Amin'ny maha-steroid anabolika azy, dia tsy mitaky anao ny maka ny anti-estrogen rehefa manapa-kevitra ny hanao fihodinana Superdrol ianao. Tsy toy ny steroids hafa mety hamela anao amin'ny vokatra mahatsiravina eo amin'ny estrogenic, ny Superdrol dia hamela ny androgen nivo ambany ambany.
Fampitomboana ny angovo sy ny tsy fahampiana
Tsy misy steroid hafa afaka hanome anao tombontsoa maro toy ny an'i Methasteron. Mampihomehy ny fampisehoana izany amin'ny fanatsarana ny famokarana sela mena. Noho izany dia mijinja tsikelikely kokoa ny angovo azo avy amin'ny angovo ianao ary koa ny fiarovana tsimatimanota kokoa.
Mandeha amin'ny fanadihadiana Superdrol, maro ireo olona milaza fa mahatsiaro ho maivana rehefa mampiasa Superdrol. Ny fampodiana sy ny fiaretana koa dia manentana ny fotoana ahafahanao mampiofana henjana kokoa. Ny fakana ny dosage ankapobeny Superdrol dia hanampy anao hiaro ny herim-po, ary afaka mampiofana mafy ianao isaky ny mahatsapa izany. Tsy tsara ve izany?
Ampio amin'ny tanjaka
Isaky ny mandre ny bandy aho miresaka momba ny fahombiazany sy ny heriny, dia mihozongozona ihany koa. Ny hery no zavatra manan-danja amin'ny fanabeazana vatana. Raha tsy mahazo azy ianao, dia mety tsy ho afaka hanandratra ny lanjanao izay heverinao. Hitanao ny dikan'ny hoe raha te ho lehibe kokoa noho ianao tsy maintsy matanjaka aloha ianao ary tsy misy fomba hafa manodidina azy.
Maro ny olona maniry ny hanana hozatra tsara ary manadino fa ny tanjaka no manampy anao. Raha te-hijery matanjaka ianao ary hanao toy izany, dia ny Superdrol no kendreo ho anao. Hanampy ny hozatrao hitombo kokoa sy ho lehibe kokoa amin'ny fotoana mitovy izany.
Buy Buy Methasteron (Superdrol) avy amin'ny Buyaas.com
Fandinihana lalina momba ny Superdrol (Methasterone) ho an'ny fanabeazana bodyguide
Ny Fanampiana amin'ny Fanatanjahantena ara-baiboly: Ho an'ny fahasalamana sy ara-pahasalamana, amin'ny Will Brink, Page 302-307
Fanampiana amin'ny sakafo ho an'ny fanatanjahan-tena sy fanatanjahan-tena, natontan'i Mike Greenwood, Matthew B. Cooke, Tim Ziegenfuss, Douglas S. Klman, Jose Antonio, pejy 13
Anabolic-Androgenic Steroids, natontan'i Charles D. Kochakian, pejy 374